Dhageyso:Xarakada Al Shabaab Oo Sheegatay Mas'uuliyadda Weerarkii Hoteel SYL Ee Muqdisho.
Thursday January 22, 2015 - 18:36:23 in Wararka by Super Admin
Taliska ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay weerar khasaara badan dhaliyay oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen Hoteel Muqdisho kuyaal.
Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab Afhayeenka Ciidanka Al Shabaab ayaa shir Jaraa’id oo uu qabtay ku faah faahiyay weerarkii Hotel SYL,waxaana xusid mudan in goobta weerarku ka dhacay lafilayay in berri uu kusoo dego Rajib Erdogaan Madaxweynaha dalka Turkiga.
Sheekh Abuu Muscab ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadoodu ay beegsadeen Hoteel kaabiga ku haya madaxtooyada Villa Somalia oo xiligaasi ay ku shirsanaayeen saraakiil caddaan ah iyo sirdoono kale oo dhammaantood duullaan kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
"Maalmahan sida aad ogtihiin Murtadiinta iyo gaalada waxay xireen waddooyinka Muqdisho oo cub ahaa dadkana dhibaata ayaa lagu hayay,shir qarsoodi ah oo saraakiil gaala caddaan ah iyo murtadiin ku lahaayeen Hoteelka SYL oo ay islahaayeen lama ogaan karo oo qarsoodi ah ayay mujaahidiintu weerareen dad murtadiinta katirsan way ku dileen kuwa kalane way ku dhaawaceen shirkiina sidaasi ayuu ku fashilmay"ayuu yiri Sheekh Abuu Mucab.
Xarakada Al Shabaab waxay carrabka ku adkeysay in weerarka ay ka fuliyeen agagaarka madaxtooyada uu banaanka soo dhigayo awoodda mujaahidiinta ee magaalada Muqdisho iyo sida ay daacadda ugu yihiin camalka jihaadka ah oo ay ku jiraan.
Sidoo kale sheekh Abuu Muscab ayaa faah faahiyay howlgal gaar ah oo ciidamada muslimiintu ay xalay ka fuliyeen deegaanka Yeed ee wilaayada Bakool wuxuuna sheegay in howlgalkaasi maleeshiyaadka Liyuu Booliska loogasoo furtay maxaabiis ay dhibaata ku hayeen.
Ugu dambeyntii Abuu Muscab ayaa shirkiisa uga hadlay dagaallo saacado badan qaatay oo duleedka Dhuusamareeb ku dhaxmaray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa Xabashida Itoobiya.
Halkan ka degso Shirka Jaraa'id Ee Abuu Muscab MP3